Maamulka Hiirshabeele oo digniin cusub soo saaray (Daawo) – Radio Daljir
Abriil 7, 2019 4:45 b 0
Dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa uga digey hay’adaha samafalka inay musuqmaasuqaan deeqaha loogu talogalay shacabka ku nool Maamul Goboleedka Hirshabelle.
Wasiir ku xigeenka Beeraha iyo Waraabka Maamul goboleedka Hirshabelle Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim”Daqare” ayaa sheegay in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in qaar ka mid ah hay’adaha samafalka ay musuqmaasuqaan deeqaha loogu talogalay beeralayda ku nool dowlad goboleedka Hirshabelle.
“Waxaan u digeynaa hay’adaha samafalka oo boqolkiiba soddon oo kaliya gaarsiiya deeqaha loogu talogalay shacabka.”ayuu yiri Wasiir ku xigeenka Beeraha Hirshabelle Xildhibaan Daqare.
Wasiir ku xigeenka Beeraha ayaan magacaabin hay’adaha samafalka ee musuqmaasuqa adeegyada loo qabto beeralayda ku nool dowlad goboleedka Hirshabelle.
Wasiirka Beeraha Dowlad Goboleedka Hirshabelle iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa dhowaan booqday degmada Buuloburde waxana ay la kulmeen qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan beeralayda ku nool degmadaas.